अब्दुलराजक गुर्नह: "विर्सिएकाहरूलाई आवाज दिने प्रयास" | वर्तमान साहित्य
जुआन अर्टिज | | जीवनी, प्रतियोगिता र पुरस्कार, लेखकहरू
जान्जीबार समुद्री दृश्य
अब्दुलराजक गुर्नह एक तान्जानियाली लेखक हुन् जसले साहित्यमा 2021 नोबेल पुरस्कार जितेका थिए। स्वीडिश एकेडेमीले भने कि लेखकलाई "उपनिवेशवादका प्रभावहरू र संस्कृति र महाद्वीपहरू बीचको खाडलमा शरणार्थीको भाग्यको गतिशील विवरणका लागि छनोट गरिएको थियो ... " सन् २००३ मा अन्तिम अफ्रिकी जोन म्याक्सवेल कोएत्जीले यो महत्त्वपूर्ण पुरस्कार जितेको १८ वर्ष भइसक्यो।
Gurnah एक संवेदनशील र कच्चा तरीका मा भोक र अफ्रिकी तटहरु बाट यूरोप को लागी युद्ध बाट विस्थापितहरु को पारगमन को वर्णन गर्न को लागी उभिएको छ, र कसरी "प्रतिज्ञा गरिएको भूमि" सम्म पुग्न उनीहरु अझै पूर्वाग्रह, बाधा र जाल को एक समुद्र लाई पार गर्न को लागी छ। । आज उहाँले दश उपन्यासहरू र धेरै संख्यामा कथाहरू र लघुकथाहरू प्रकाशित गर्नुभएको छ, सबै अंग्रेजीमा लेखिएका छन्। यद्यपि स्वाहिली उनको मूल भाषा हो। 2006 देखि उहाँ रोयल लिटरेचर सोसाइटीको सदस्य हुनुहुन्छ, ग्रेट ब्रिटेनमा साहित्यको अध्ययन र प्रसारमा समर्पित संस्था।
1 लेखक, अब्दुलराजक गुर्नह को जीवनी डेटा
1.1 बचपन र अध्ययन
1.2 कलेजका प्राध्यापक
2 लेखक अनुभव
3 लेखकको शैली
4 एक नोबेल जसले संसारलाई चकित बनायो
4.1 गुर्नह शक्तिहरू
4.2 एक पुरस्कार अन्य राष्ट्रीयताहरु को प्रभुत्व
4.3 कडा प्रतिस्पर्धा
4.4 नोबेल जिते पछि लेखक को छाप
4.5 प्रेस छाप
5 स्वर्ग, Gurnah को सबैभन्दा उत्कृष्ट काम
6 अन्य गुर्न उपन्यासहरूको सारांश
6.1 प्रस्थानको सम्झना (1987)
6.2 समुद्र द्वारा (2001)
6.3 त्याग (२००५)
7 अब्दुलराजक गुर्नहको काम पूरा भयो
7.2 निबन्ध, लघुकथा र अन्य कामहरु
लेखक, अब्दुलराजक गुर्नह को जीवनी डेटा
बचपन र अध्ययन
अब्दुलराजक गुर्नहको जन्म डिसेम्बर २०, १९४८ मा जान्जिबार (तान्जानियाको द्वीपसमूह) टापुमा भएको थियो। १८ वर्षको उमेरमा उनी मुसलमानहरूमाथिको सतावटका कारण आफ्नो मातृभूमिबाट भागेर युनाइटेड किंगडम गएका थिए। पहिले नै अंग्रेजी माटोमा, उनले क्राइस्ट चर्च कलेज मा उच्च शिक्षा हासिल गरे र १ 1982 in२ मा केन्ट विश्वविद्यालय मा एक डॉक्टरेट पूरा गरे।
दशकौंदेखि, गुरनाहले आफ्नो जीवन विश्वविद्यालय तहमा अंग्रेजी अध्ययनको क्षेत्रमा अध्यापनमा समर्पित गरेकी छिन् ।। लगातार तीन बर्ष (1980-1983) को लागी उनले नाइजीरिया मा Bayero विश्वविद्यालय कानो (BUK) मा पढाउनुभयो। उहाँ अंग्रेजी र उत्तर औपनिवेशिक साहित्य को प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो, साथ साथै केन्ट विश्वविद्यालय मा अंग्रेजी विभाग को निदेशक हुनुहुन्थ्यो, कर्तव्यहरु कि उनी सेवानिवृत्त नभएसम्म आयोजित।
उनका खोज कार्यहरू उत्तर-उपनिवेशवादमा केन्द्रित छन्, साथै उपनिवेशवाद मा अफ्रिका, क्यारिबियन र भारत मा निर्देशित। हाल, महत्त्वपूर्ण विश्वविद्यालयहरूले उनको कामलाई शिक्षण सामग्रीको रूपमा प्रयोग गर्छन्। अनुभवी शिक्षकहरूद्वारा सिकाइएका विषयहरू फरक छन्, जस्तै: Patricia Bastida (UIB), Maurice O'Connor (UCA), Antonio Ballesteros (UNED) र Juan Ignacio de la Oliva (ULL), केही नामहरू।
लेखकको रूपमा आफ्नो करियरमा उनले छोटो कथा र निबन्धहरू सिर्जना गरेका छन्, तथापि, उनका उपन्यासहरूले उनलाई सबैभन्दा बढी मान्यता दिएका छन्। १ 1987 बाट वर्तमान सम्म, उनले यस विधामा १० कथा कृतिहरु प्रकाशित गरेका छन्। उनको पहिलो तीन कृतिहरु -प्रस्थान को मेमोरी (1987), तीर्थयात्रीहरुको बाटो (1988) र Dottie (1990) - समान विषयवस्तुहरू छन्: तिनीहरू ग्रेट ब्रिटेनमा आप्रवासीहरूको अनुभवको विभिन्न सूक्ष्मताहरू देखाउँछन्।
1994 मा उनले आफ्नो सबैभन्दा मान्यता प्राप्त उपन्यास मध्ये एक प्रकाशित, प्रमोदवनमा, जो 2001 मा प्रतिष्ठित ब्रिटिश बुकर पुरस्कार को लागि एक फाइनल थियो। यो काम स्पेनिश भाषामा ल्याइएको पहिलो थियो -के स्वर्ग-, यो 1997 मा बार्सिलोनामा प्रकाशित भएको थियो र सोफिया कार्लोटा नोगुएरा द्वारा अनुवाद गरिएको थियो। Gurnah को दुई अन्य शीर्षकहरु कि Cervantes को भाषा मा ल्याईएको हो: अनौठो मौनता (1998) र किनारमा (2007)।
गुर्नह - "विस्थापितहरूको आवाज" मानिन्छ - अन्य उपन्यासहरूको लागि पनि बाहिर खडा भएको छ, जस्तै: समुन्द्र छेउ (2001), उजाड (2005) र बजरी मुटु (2017)। 2020 मा उनले आफ्नो प्रस्तुत गरे पछिल्लो कथा कार्य: पछिको जीवन, ब्रिटिश आलोचकहरु द्वारा मानिन्छ: "बिर्सिएकालाई आवाज दिने प्रयास।"
लेखक को कामहरु बर्बाद बिना गद्य मा लेखिएको छ; तिनीहरुमा निर्वासन, पहिचान र जरा जस्ता मुद्दाहरूमा उनीहरूको चासो स्पष्ट छ। उनका किताबहरु पूर्वी अफ्रिका को उपनिवेश को प्रभाव र के त्यहाँका बासिन्दाहरु कष्ट देखाउँछन्। यो एक आप्रवासी को रूप मा उनको जीवन को एक प्रतिबिम्ब को रूप मा देखिएको छ, एक प्रमुख तत्व हो कि उनलाई ब्रिटिश क्षेत्र मा बस्ने डायस्पोरा को अन्य अफ्रिकी लेखकहरु बाट फरक छ।
त्यस्तै गरी, नोबेल समितिका अध्यक्ष एन्डर्स ओल्सनले गुर्नहले सिर्जना गरेका पात्रहरू निकै राम्ररी निर्माण भएको ठान्छन्। यस सन्दर्भमा, उहाँ यसो भन्नुहुन्छ: "उनीहरूले पछि छोडेको जीवन र भविष्यको जीवनको बीचमा, उनीहरूले जातिवाद र पूर्वाग्रहको सामना गर्छन्, तर उनीहरूले सत्यलाई मौन राख्न वा वास्तविकतासँग द्वन्द्वबाट बच्न आफ्नो जीवनीलाई पुन: खोज्न पनि मनाउँछन्।"
एक नोबेल जसले संसारलाई चकित बनायो
साहित्य मा नोबेल पुरस्कार
साहित्यिक संसार भित्र पनि, धेरैले सोध्छन् "अब्दुलराजक गुर्नह को हो?" वा "किन अज्ञात लेखकले पुरस्कार जित्यो?" तथ्य यो हो कि गुर्नह हुनुको धेरै कारणहरू छन् 2021 जित्ने पाँचौं अफ्रिकी साहित्य मा नोबेल पुरस्कार। यद्यपि, सबै कुराले जूरीले लेखकद्वारा सम्बोधन गरेको विषयवस्तुको आधारमा निर्णय गरेको संकेत गर्दछ।
तथ्य यो हो कि धेरै एक तन्जानियाई लेखक को पथ को बारे मा अनजान छन् एक लेखक को रूप मा आफ्नो प्रतिभा बाट बिचलित छैन। उसको भाषाको समृद्ध कमाण्ड, संवेदनशीलताको साथमा उसले प्रत्येक पङ्क्तिमा क्याप्चर गर्ने प्रबन्ध गर्दछ, उसलाई पाठकको नजिक लेखक बनाउँछ।। उहाँका कृतिहरूमा उहाँको जन्मभूमि र उहाँका देशबासीहरूको वास्तविकताप्रतिको उहाँको प्रतिबद्धताको प्रमाण पाइन्छ, जसले उहाँको कलमको मानवीय स्वभाव र उहाँका अनुभवहरू र उहाँको साहित्यिक कार्यबीचको सम्बन्धलाई बढाउँछ। प्रत्येक कथाले महाद्वीपमा भोगेका युद्धहरूद्वारा चिन्हित सन्दर्भ देखाउँदछ।
तर गुरना किन फरक छ? खैर, लेखकले इङ्गल्याण्ड र अफ्रिका बीच के भयो भन्ने बारे अनावश्यक कथाहरू पुन: सिर्जना गर्न अस्वीकार गर्दछ। आफ्ना पुस्तकहरूद्वारा उनले अफ्रिकी महाद्वीप र त्यहाँका मानिसहरूको नयाँ दर्शन देखाएका छन्, घने बारीकियों को साथमा केहि लाई ध्यान मा राखिएको छ, जो रूढीवाद भंग गरीएको छ र पढ्नेहरु को नजर मा विस्थापित को आंकडा जोडिएको छ। अब्दुलराजक उपनिवेशवाद को वास्तविकता र यसको परिणाम आज उठाउँछन् - पलायन मात्र उनीहरु मध्ये एक हो, तर मासु र रगत को।
एक पुरस्कार अन्य राष्ट्रीयताहरु को प्रभुत्व
यो कुनै आश्चर्य को कुरा छैन कि १ 1901 ०१ मा साहित्य को लागी नोबेल पुरस्कार को निर्माण पछि, विजेताहरु को बहुमत यूरोपीय वा उत्तरी अमेरिकी भएको छ। फ्रान्स 15 पुरस्कार विजेता लेखकहरूको साथ पहिलो स्थानमा छ, संयुक्त राज्य अमेरिका 13 र ग्रेट ब्रिटेन 12 संग नजिक छ। र, पहिले नै उल्लेख गरिएझैं, केवल पाँच अफ्रिकीहरूले यस प्रसिद्ध सम्मानबाट सम्मानित भएका छन्।
अठार वर्ष बितिसकेको थियोपछिल्लो अफ्रिकी से यो महत्त्वपूर्ण पुरस्कार संग उठाइयो: जोन मैक्सवेल कोएत्जी। दक्षिण अफ्रिका भन्दा पहिले, उनी १ 1986 in मा नाइजेरियाली वोले सोयन्का, १ 1988 in मा इजिप्शियन नागुइब महफौज र १। १ मा पहिलो अफ्रिकी महिला नादिन गॉर्डिमर द्वारा प्राप्त भएका थिए।
अहिले, किन यति धेरै असमानता छ?; निस्सन्देह, यो हो केहि जवाफ दिन गाह्रो। जे होस्, यो आशा छ कि यी आउँदो बर्षहरु स्वीडिश एकेडेमी मा परिवर्तन देखीनेछ, कारण, ठूलो भाग मा, असमानता र दुर्व्यवहार को बारे मा घोटालाहरु कि 2018 मा भयो। यसैले, एक बर्ष पछि परिवर्तन को उद्देश्य संग एक नयाँ समिति बनाईएको थियो। दृष्टि र अपमानजनक परिदृश्यहरु बाट बच्न। यस सन्दर्भमा, एन्डर्स ओल्सनले व्यक्त गरे:
"हामी लेखकहरु को लागी हाम्रो आँखा खुला छ जो पोस्टकोलोनियल भन्न सकिन्छ। हाम्रो नजर समय संगै फराकिलो हुन्छ। र अकादमीको उद्देश्य हाम्रो साहित्यको दृष्टिकोणलाई बलियो बनाउनु हो गहिरो मा। उदाहरण को लागी, उत्तर औपनिवेशिक संसार मा साहित्य "।
यी नयाँ सिद्धान्तहरूले अफ्रिकीहरूलाई ठूला नामहरू अघि ध्यान दिनको लागि जन्म दिए। उहाँको विशेष अद्वितीय कार्यहरू - कठिन तर अत्यन्त वास्तविक विषयहरूको साथ - नोबेल समितिले यसलाई वर्गीकरण गर्न अनुमति दियो "संसारको सबैभन्दा प्रख्यात पोस्टकोलोनियल लेखकहरु मध्ये एक ... "।
यस वर्ष वातावरणमा ख्यातिप्राप्त साहित्यकारहरूको नाम थियो। लेखकहरू जस्तै: Ngugi Wa Thiong'o, Haruki Murakami, जेभियर मारियास, Scholastique Mukasonga, Mia Couto, Margaret Atwood, Annie Ernaux, अन्य। गुर्नाहको विजयमा व्यर्थमा अचम्म लागेन, जुन राम्रोसँग योग्य छ, पवित्रा व्यक्तिको घना जंगलमा उत्पन्न हुन्छ।
नोबेल जिते पछि लेखक को छाप
अवार्ड पाएपछि स्व. तान्जानियन लेखकले आफूले बनाएको विषयवस्तुलाई त्याग्न चाहँदैनन् नोबेल पुरस्कार विजेता. मान्यता संग तपाइँ बिभिन्न बिषयहरुमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न को लागी अधिक प्रेरित महसुस गर्नुहुन्छ र एक फ्रैंक तरीका मा संसार को तपाइँको धारणा।
लन्डनमा एक अन्तर्वार्तामा, उनले भने: "म यी अवस्थाहरूको बारेमा लेख्छु किनभने म मानव अन्तरक्रियाको बारेमा लेख्न चाहन्छु र तिनीहरूले आफ्नो जीवन पुनर्निर्माण गर्दा मानिसहरूले के भोग्छन्। ”
अब्दुलराजक गुर्नाह को नोबेल पुरस्कार विजेता को रूप मा पदक स्वीडिश क्षेत्र र सारा संसार लाई आश्चर्यचकित बनायो। लेखक सम्भावित विजेताहरू मध्ये थिएनन्, किनभने उनका कामहरू विशेषज्ञहरूले घोषणा गरेका थिएनन् साहित्य मा। यसको प्रतिबिम्ब टिप्पणीहरु थिए कि नियुक्ति पछि प्रेस मा उदय भयो, यी मध्ये हामी हाइलाइट गर्न सक्छौं:
"स्वीडिश एकेडेमी को एक रहस्यमय विकल्प"। एक्सप्रेस (एक्सप्रेस)
"साहित्यको नोबेल पुरस्कार विजेताको नाम प्रस्तुत गर्दा आतंक र अन्योल।" दिउँसोको डायरी (Aftonbladet)
"बधाई छ अब्दुलराजक गुर्नह! २०२१ को साहित्यमा नोबेल पुरस्कारको हकदार छ। राष्ट्रिय EN (Jorge Ivan Garduño)
"यो समय यो महसुस गर्न को लागी हो कि गैर-सेतो मानिसहरु लेख्न सक्छन्।" स्वीडिश अखबार (Svenska Dagbladet)
"अब्दुलराजक गुर्नाह, एक तारा जसलाई कसैले एक पैसा मा शर्त गर्दैन" Lelatria पत्रिका (Javier Claure Covarrubias)
"गुर्नहको लागि नोबेलको समाचार उपन्यासकारहरू र विद्वानहरू द्वारा मनाइएको थियो जसले लामो समयदेखि तर्क गरेका छन् कि उनको काम व्यापक पाठकहरूको योग्य छ।" न्यु योर्क टाइम्स
प्रमोदवन, Gurnah को सबैभन्दा उत्कृष्ट काम
1994 मा गुर्नहले आफ्नो चौथो उपन्यास र पहिलो जसको पाठहरू स्पेनिशमा अनुवाद गरिएको थियो, पाराइसो प्रस्तुत गरे। यस कथाको साथ, अफ्रिकी लेखकले साहित्यिक क्षेत्रमा ठूलो मान्यता प्राप्त गरे, अहिलेसम्म यसको सबैभन्दा प्रतिनिधि सृष्टि हो। कथा एक सर्वज्ञ आवाज संग भनिएको छ; यो उनको जन्मभूमिमा गुर्नहको बाल्यकालको सम्झनाहरूसँग काल्पनिक मिश्रण हो।
रेखाहरू बीच, गुरनाहले बालबालिकालाई निर्देशित गरेको भयानक दास प्रथाको स्पष्ट निन्दा गर्छिन्, जो अफ्रिकी क्षेत्र मा बर्षहरु को लागी भएको छ। सबै प्राकृतिक सुन्दरता, जीव र किंवदन्तीहरु कि क्षेत्र को संस्कृति को हिस्सा हो संग बारी मा intertwined।
प्याराडाइज: बीबीसी रेडियो ४ लाई...
यसको अनुभूतिको लागि, लेखक तान्जानियामा सारियो, यद्यपि त्यहाँ उनले भने: "मैले डाटा सङ्कलन गर्न यात्रा गरेको होइन, तर मेरो नाकमा धुलो ल्याउन"। यसले यसको उत्पत्तिको गैर-अस्वीकारलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ; त्यहाँ एक सुन्दर अफ्रिकाको सम्झना र मान्यता छ, तथापि, गम्भीर द्वन्द्वहरूले भरिएको वास्तविकता अन्तर्गत।
केही विशेषज्ञहरू सहमत छन् कि कथानक चित्रण «lअफ्रिकी बच्चाको किशोरावस्था र परिपक्वता, एक दुखद प्रेम कथा र अफ्रिकी परम्पराको भ्रष्टाचारको कथा युरोपेली उपनिवेशवादको कारण।
कथानक सुविधा युसुफ, तान्जानियाको कावा (काल्पनिक सहर) मा १९०० को प्रारम्भमा जन्मेको १२ वर्षीय केटा। उसको बुबा उनी एक होटलका प्रबन्धक हुन् अजीज नामक एक व्यापारी debtणमा छन्जो एक शक्तिशाली अरब टाइकुन हो। यो प्रतिबद्धताको सामना गर्न नसकेर, उनी आफ्नो छोरालाई प्यादा गर्न बाध्य छन् भुक्तानी को भाग को रूप मा।
चलिरहेको यात्रा पछि, केटा आफ्नो "काका अजीज" संग तट मा जान्छ। त्यहाँ उनको जीवन rehani को रूप मा शुरू हुन्छ (अवैतनिक अस्थायी दास), उसको साथी खलील र अन्य नोकरहरु संग। उनको मुख्य कार्य अजीज स्टोर को काम र ब्यबस्थापन गर्नु हो, जहाँ व्यापारी द्वारा परिधि मा बेचेका उत्पादनहरु बाट आउँछन्।
यी कार्यहरू बाहेक, युसुफले आफ्नो मालिकको पर्खालले घेरिएको बगैंचाको हेरचाह गर्नुपर्छ, एक भव्य ठाउँ जहाँ उसले पूर्ण रूपमा महसुस गर्छ। रातमा, ऊ इडेनिक ठाउँमा भाग्छ जहाँ सपनाहरूद्वारा उसले आफ्नो जराहरू खोज्छ, त्यो जीवनको जुन उसबाट खोसिएको थियो। युसुफ एक सुन्दर जवान मानिसको रूपमा बढ्छ र आशाहीन प्रेमको लागि चाहान्छ, जबकि अरूले चाहान्छ।
17 वर्षको उमेरमा, युसुफ व्यापारी कारवांसँग आफ्नो दोस्रो यात्रामा लागे मध्य अफ्रिका भर र कंगो बेसिन। भ्रमण को समयमा त्यहाँ बाधाहरु को एक श्रृंखला मा लेखक अफ्रिकी संस्कृति को हिस्सा कब्जा छन्। जंगली जनावरहरू, प्राकृतिक सौन्दर्यहरू र स्थानीय जनजातिहरू प्लटमा अवस्थित केही आदिवासी तत्वहरू मात्र हुन्।
पूर्वी अफ्रिका फर्केपछि, पहिलो विश्वयुद्ध सुरु भयो र उनको मालिक अजिजले जर्मन सैनिकहरूलाई भेटे। धनी व्यापारीको शक्तिको बावजुद, उनी र अन्य अफ्रिकीहरूलाई जर्मन सेनामा सेवा गर्न भर्ती गरिन्छ। यस बिन्दुमा, युसुफले आफ्नो जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनेछन्।
अन्य गुर्न उपन्यासहरूको सारांश
प्रस्थान को मेमोरी (1987)
यो हो लेखकको पहिलो उपन्यास, मा सेट गरिएको छ la पूर्वी अफ्रिकाको तटीय क्षेत्र। यसको नायक एक युवा हो, जसले आफ्नो देशमा स्वेच्छाचारी प्रणालीको सामना गरेपछि, आफ्नो धनी काकासँग केन्या पठाइन्छ। इतिहासभरि उनको यात्रा प्रतिबिम्बित हुनेछ र यो कसरी आध्यात्मिक पुनर्जन्मको लागि बढ्छ।
प्रस्थान को स्मृति: द्वारा ...
समुन्द्र छेउ (2001)
यो लेखक द्वारा छैटौं पुस्तक हो, यसको स्पेनिश संस्करण 2003 मा बार्सिलोना मा प्रकाशित भएको थियो (कारमेन Aguilar द्वारा अनुवाद संग)। यस कथामा त्यहाँ दुईवटा कथाहरू छन् जुन नायकहरू ब्रिटिश समुद्रको तटमा भेट्दा अन्तर्निहित हुन्छन्। यी हुन् सालेह ओमार, जसले जान्जिबारमा सबै कुरा छोडेर इङ्गल्याण्ड जान्छन्, र लतिफ महमुद, एक युवा जो धेरै पहिले भाग्न सफल भएका थिए र वर्षौंदेखि लन्डनमा बसेका थिए।
यो एक उपन्यास हो जुन दुई चरणमा लिन्छ, पहिलो 1899 मा र त्यसपछि 50 वर्ष पछि। सन् १८९९ मा, मरुभूमि पार गरेर पूर्वी अफ्रिकी सहरमा आइपुगेपछि अङ्ग्रेज मार्टिन पियर्सलाई हसनलीले बचाए।। व्यापारीले आफ्नी बहिनी रेहानालाई मार्टिनको घाउ निको पार्न र उनी निको नभएसम्म उनको हेरचाह गर्न आग्रह गर्छन्। चाँडै, दुई बीच एक ठूलो आकर्षण पैदा हुन्छ र तिनीहरूको गोप्य रूपमा भावुक सम्बन्ध हुन्छ।
त्यो निषेधित प्रेम को नतिजा ५ दशक पछि प्रतिबिम्बित हुनेछ, जब मार्टिन का भाई रेहाना को नातिनी संग माया मा पर्छन्। कथा समय को पारित, सम्बन्ध मा औपनिवेशिकता को नतीजा र समस्याहरु को माया को प्रतीक को मिश्रण गर्दछ।
यस उपन्यासको बारेमा, समीक्षक माइक फिलिप्सले अंग्रेजी अखबारको लागि लेखे अभिभावक:
Des अधिकांश मरुभूमि यो यति सुन्दर ढंगले लेखिएको छ र केहि पनी तपाइँ भर्खरै पढ्नु भएको जस्तो रमाईलो छ, औपनिवेशिक बाल्यकालको मीठो उदासीन सम्झना र हराएको मुस्लिम संस्कृति, यसको चिन्तनशील र बानी व्यवहार द्वारा परिभाषित, यसको चाडपर्व र धार्मिक अनुष्ठानहरूको क्यालेन्डरले ओभरलाइड।
अब्दुलराजक गुर्नहको काम पूरा भयो
प्रस्थानको स्मृति (1987)
तीर्थयात्रीहरुको बाटो (1988)
प्रमोदवनमा (1994) - प्रमोदवन (1997)।
प्रशंसा मौन (1996) - अनौठो मौनता (1998)
समुन्द्र छेउ (2001) - किनारमा (2003)
अन्तिम उपहार (2011)
बजरी मुटु (2017)
निबन्ध, लघुकथा र अन्य कामहरु
अफ्रिकी लेखन १ मा निबन्ध: एक पुन: मूल्यांकन (1993)
Ngũgĩ वा Thiong'o को कथा मा परिवर्तनकारी रणनीतिहरु (1993)
Wole Soyinka मा Wole Soyinka को कथा: एक मूल्या्कन (1994)
नाइजेरिया मा आक्रोश र राजनैतिक छनौट: सोयिन्का पागल र विशेषज्ञहरु को एक विचार, मानिस मरे, र एनोमी को मौसम (१ 1994 ४, सम्मेलन प्रकाशित)
अफ्रिकी लेखन2मा निबन्ध: समकालीन साहित्य (1995)
चिच्या को मध्य बिन्दु ': Dambudzo Marechera को लेखन (1995)
आगमन को पहेली मा विस्थापन र परिवर्तन (1995)
तीर्थयात्री को बाटो बाट (1988)
Postcolonial लेखक कल्पना (2000)
अतीत को एक विचार (2002)
अब्दुलराजक गुर्नाह को एकत्रित कथाहरु (2004)
मेरी आमा अफ्रिका मा एक फार्म मा बस्नुभयो (2006)
सलमान रुश्दी को क्याम्ब्रिज कम्प्यानियन (२००,, पुस्तक को परिचय)
मध्यरात को बच्चाहरु मा विषयहरु र संरचनाहरु (2007)
Ngũgĩ वा Thiong'o द्वारा गहुँ को एक अन्न (2012)
आगमनको कथा: अब्दुलराजक गुर्नाह को रूप मा भनिएको छ (2016)
कहीं पनी आग्रह: Wicomb र Cosmopolitanism (2020)
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » जीवनी » अब्दुलराजक गुर्नाह
जुआन फ्रान्सिस्को फेरेन्डिज। पानी परीक्षण को लेखक संग साक्षात्कार